Cucumbers yakavezwa nemaapuro - kuravira kunoshamisa! | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Cucumbers yakavezwa nemaapuro - kuravira kunoshamisa!
Iyi yekukweta, yekumberi appetizer inosiyana kubva kune vamwe vese mukunyorova uye siki iyo iyo yakasvibirira mitundu yemapuro anopa. Iyo yekushanda inonhuhwirira uye inonaka, kusanganisa kwemakango uye michero mairi inopa kutaridzika kunoratidzika. Zvinonhuwira uye zvinonhuwira zvinopa hwema uye kuwala pungency.
Kukohwa iyo yekutanga yakasarudzika assortment zvichienderana neresipi yedu, haungazvidembi.
Inodikanwa inoenderana ne3 l:
1,5-2 kg yemakonzo, zvichienderana nehukuru;
2 zino. Garlic
3-4 maapuro madiki, girini yakasviba;
4 dill amburera;
assort currant uye Cherry mashizha (zvakaenzana, mu3 kana 4 pcs);
2-3 sprigs yemutsva mutsva;
2 bud ye carnation;
kunhuhwirira. pepper - 6-7 peas;
2 tsamba yeparsley.
5 tsp shuga
4 tsp munyu coarse;
2 isina kukwana tsp vhiniga (9 muzana);
Kubheka akachekwa machungwa - nzira
1. Sakanidza magirazi nokungwarira, cheka Garlic kuita zvidimbu zvidiki.
2. Mune yakachena, hovhoni-yakabikwa majiroji, rara makuki akashambidzwa, muchidururira iwo zvakaenzana mune zvinonhuwira nemaapuro. Iko kugadzirira kwemaapuro ndeiyi: suka, geza kubva pamhodzi, uye usabata ganda, rakatemwa muzvikamu.
3. Isu tinodziya mvura kumvura inovira. Dururira mumakonzo nematangi uye maapuro. Fukidza nemabhandi. Mushure memaminitsi e20 yekuisira, dururira mvura kubva kumatangi mupani yakakura.
4. Zvekare, kupisa kune bhutsi, dururira zvikamu zvakagadziriswa zvemunyu uye shuga, svina uye udururire mhinduro mumidziyo. Zvekare tinoisa marangi uye nekusimbirira kwemaminetsi e10.
5. Kupfuurirazve, zvinoenderana nekubheka kunoita makomichi akasvinwa, isu tinodzosera brine kune imwe pani uye zvakare tomirira kusvikira yabika. Ipapo tinowedzera tafura vhiniga - uye tinoita yekuzadza kwechitatu makomichi nemaapuro.
6. Isu tinosimbisa matumba nemuchina wekusevha, toisa matangi acho padenga pasi pane chigero chakaiswa pasi. Isu tinovhara maburi pamativi ese nechimwe chinhu chinodziya uye tendera kuti vatonhore.
7. Isu tinochengetera makomkete anonamira akachekwa nemaapuro mukamuri inotonhorera kana pane imwe tembiricha, asi kure nezuva
Ive nechokwadi chekugovera nzira yekubheka makomichi akasarudzika neshamwari dzako, hazvina kuoma kwauri, ivo vanofara uye vanobatsira!
Yakasarudzika nguva yechando applesauce
Iwe uchave uchifarira:
Prunes ne walnuts. Iko kusawanzo kuravira kweessess
Cowberry nemapuro kwemaminitsi mashanu. Recipe maminitsi mashanu kubva kune cranberries ane maapuro?
Cucumbers Ndeipi hupenyu hwefufu yemakonzo? Yakawanda sei yekuchengetedza makonzo?
Nzira yekugunzva makomkomati nematato munguva yechando? Unganamatira sei mukomanda nematato pamwe chete?
Mibvunzo ye31 mu database yakagadzirwa mu 0,394 masekondi.